Ixabiso lendawo yimbono ebaluleke kakhulu efundiswa kwangoko. Njengoko abafundi bafunda malunga nenani elikhulu, umgangatho wendawo yexabiso uyaqhubeka kuwo onke amabakala aphakathi. Ixabiso lendawo libhekisela kwixabiso ledijithi ngokusekelwe kwindawo yalo kwaye ingaba yinto enzima kubafundi abaselula ukuba baqonde, kodwa ukuqonda le ngcamango kubalulekile ekufundeni izibalo.
Ixabiso lini na indawo?
Ixabiso lendawo libhekisela kwixabiso leenombolo nganye kwinani.
Ngokomzekelo, inani le- 753 linalo "iindawo" ezintathu-okanye iikholumu-nganye ngexabiso elithile. Kule nombolo enamanani amathathu, i- 3 isendaweni "yeyona", i- 5 isendaweni "yeshumi", kwaye i- 7 isendaweni "yamakhulu".
Ngamanye amagama, i- 3 ibonisa ezintathu zeeyunithi ezingatshatanga, ngoko ixabiso leli nani li-ezintathu. I- 5 iyindawo yeshumi, apho ixabiso linyuka ngama-multiples ka-10. Ngoko ke, ama- 5 anelungelo leeyunithi ezi-10, okanye i- 5 x 10 , ezilingana nama-50. 100, okanye 700.
Abafundi abasebancinci bayabambana nale ngcamango kuba ixabiso leenombolo nganye lihluke ngokuxhomekeka kwikholam, okanye kwindawo, ehlala kuyo. ULee Shumate, ukubhala kwiwebhusayithi yeDemme Learning, inkampani yokupapasha yemfundo, ichaza:
"Kungakhathaliseki ukuba uyise usekhitshini, igumbi lokuhlala, okanye igaraji, usengumama, kodwa ukuba idijithi 3 iindawo ezahlukeneyo (amashumi okanye amakhulu endaweni, umzekelo), ithetha into eyahlukileyo."
I- 3 kule kholamu iphela 3. Kodwa enye efanayo kwi-column yeshumi i- 3 x 10 , okanye i-30, kunye ne- 3 kumakhulu emikholam i- 3 x 100 , okanye i-300. Ukufundisa ixabiso lentengo, banike abafundi izixhobo kufuneka baqonde le ngcamango.
Isiseko 10 Iibhloko
Iibhloko ze-10 zezixhobo zetekisi ezisetyenziselwa ukubanceda abafundi bafunde ixabiso lentengo kunye neebhloko kunye neeflethi ngemibala eyahlukileyo, njengobuncinci obumnyama okanye obuhlaza (kubakho), iintonga eziluhlaza (ngamashumi) kunye neeflethi ze-orange (eziphethe izikwere eziyi-100) .
Ngokomzekelo, cinga inombolo efana ne- 294. Sebenzisa iibhubhu eziluhlaza, iibrabhu eziluhlaza (eziqulethe iibhloko ezili-10 ngamnye) ukumela i-10s, kunye neefestile eziyi-100 zamakhulu. Bala iintlobo ezine zeekhabhi eziluhlaza ezimelela ezi- 4 kwiikholamu, iibhola ezisibhozo ezisi-blulu (eziqulethwe eziliqela ezili-10 ngamnye) ukumela i- 9 kwikholamu yeshumi, kunye neenqwelo ezimbini ezi-100 zokumela i- 2 kumakhulu emikholam.
Awunakuze usebenzise iibhloko ezili-10 ezinemibala eyahlukeneyo. Umzekelo, ukwenzela inombolo ye- 142 , uza kufaka i-flat flat 100 kwiindawo ezinamakhulu, iindonga ezine zeeyunithi ezili-10 kwikholamu yeshumi, kunye neendawo zombini zeeyunithi enye.
Ixabiso leNdawo yexabiso
Sebenzisa ishati efana nomfanekiso kule nqaku xa ufundisa ixabiso lendawo kubafundi. Chaza ukuba ngelo hlobo letshathi, banokumisela ixabiso leendawo zenani elininzi kakhulu.
Ngokomzekelo, ngenani elinjenge- 360,521 : i- 3 iya kufakwa kwi-"Amakhulu amawaka ekholomu" kwaye imele 300,000 ( 3 x 100,000) ; i- 6 iya kufakwa kwi-"Imashumi yeeNkulungwane zekholam" kwaye imele ama-60,000 ( 6 x 10,000 ); i- 0 iya kufakwa kwi-"Thousands" ikholomu kwaye imele i-zero ( 0 x 1,000) ; i- 5 iya kufakwa kwiikholam "Amakhulu" kwaye imele 500 ( 5 x 100 ); i- 2 iya kufakwa kwikholam ye "Imashumi" kwaye imele i-20 ( 2 x 10 ), kwaye enye iya kuba "kwiZixhobo" -ezo zikholo kwaye zimele 1 ( 1 x 1 ).
Yenza ikopi yetshathi. Nika abafundi amanani ahlukeneyo ukuya kwi-999,999 kwaye babeke idijithi echanekileyo kwikholam ehambelana nayo. Ngaphandle koko, sebenzisa izinto ezahlukeneyo ezinjengemibala ye-gummy, ii cubes, iifake zandiweyo, okanye iipaki ezincinane zephepha.
Chaza ukuba yintoni umbala ngamnye umele, njengoluhlaza kubo, uluphuzi ngamashumi, obomvu ngamakhulu, kunye nomdaka ngamashumi. Bhala inombolo, efana ne- 1,345 , kwibhodi. Umfundi ngamnye kufuneka abeke inani elichanekileyo lezinto ezinemibala kwiikholethi ezihambelanayo kwitshati yakhe: omnye umbala obomdaka kumqolo we "Thousands", abathathu abamnyama obomvu kwikholomu "Amakhulu", amane amacwecwe aphuzi kwikholomu "Amashumi", kunye neesithandathu amanqaku aluhlaza kwikholam ye "Ones".
Xa umntwana eqonda ixabiso lentengo, udla ngokukwazi ukujikeleza iinombolo kwindawo ethile.
Isitshixo siqonda ukuba amanani alungelelanayo afana neenombolo ezijikelezayo. Umgaqo oqhelekileyo kukuba ukuba idijithali inesihlanu okanye ngaphezulu, ujikeleza. Ukuba idijithi enye okanye ngaphantsi, ujikeleza.
Ngoko, ukujikeleza inani le- 387 ukuya kwindawo elishumi elisondeleyo, umzekelo, ubuya kujonga inombolo kwinqoloba, eyi- 7. Ukususela kwisixhenxe kuneminyaka emihlanu, ijikeleze ukuya kwi-10. 10 kwindawo leyo, ngoko uya kushiya i-zero kule ndawo kwaye ujikeleze inamba kwindawo yeshumi, 8 , ukuya kwidijithi elandelayo, eyi- 9 . Inani elijikelezwe kwi-10 elisondeleyo liya kuba ngu- 390 . Ukuba abafundi bazama ukujikeleza ngale ndlela, hlaziya ixabiso leendawo njengoko kuthethwa ngazo ngaphambili.
Funda indlela yokubala irhafu yentengiso
Ukufumana ipesenti yeShintsho
Abazali, iiBraces, neBanks kwiMathe
Ubume bemiSebenzi yeStem neLeaf
Indlela yokubala iiKomishoni usebenzisa i-Percents
Funda ngeNombolo yemvelo, iNombolo yonke, kunye ne-Integers
Iimviwo zeMatriki eziMalathisi ezilula
IsiNgesi saseMelika-saseMelika (iAAVE)
Isikhokelo kwezixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa iMimoya yezulu
Iingqungquthela zendalo yamandulo
Indlela yokufumana i-Formule yoBukhosi ukusuka kwi-Percent Composition
Bicapitalization, Ukusuka DreamWorks kwi-YouTube
Phezulu Alfred, Nkosi Tennyson Imibongo
IziCwangciso zokuPhucula eziShumi
10 Iodine Facts
Uqeqesho lweBuddh Mindfulness & Qigong Practice
UFranklin & Marshall College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iintlobo ze-Paintball Gun
Iimyalelo ezili-10 zokubeka imoto kwiJack Stands
IsiFrentshi Sithetha Inxaxheba -Le Participe Okwangoku
Amanyathelo okuThuthukiswa kwamahlathi
Indlela yokufumana amathikiti e-Super Bowl